Table Index - MYSTERY ZILLION
October 2016 in Database
Why table Index is used?
Is there any problem when much of them are used?
table မှာ index လုပ်သည့် အကြောင်းအရင်းက query လုပ်သည့် အခါမှာ မြန်အောင်ပါ။ index လုပ်သည့် အခါလည်း ဘယ် table ရဲ့ ဘယ် filed ကို ဘယ် လို index လုပ်မယ်ဆိုပြီး ရှိပါတယ်။
index လုပ်ထားသည့်အခါမှာ query လုပ်သည့် ပုံမှန် ထပ်ပိုပြီး မြန်ပါတယ်။ သာမာန် အနေဖြင့် မသိနိုင်ပေမယ့် row တွေ သိန်း သန်း ချီလာသည့် အခါမှာ index လုပ်ထားတာနဲ့ မလုပ်ထားတာ အတော်လေးကို ကွာပါတယ်။
Index ဘာလို့သုံးလဲက အပေါ်မှာ စေတန်ပြောထားတယ်။ Index တွေကို Query မြန်ဖို့လို့ ယေဘုယျအနေနဲ့ သုံးပေမယ့် ရှိတိုင်းလည်း ကောင်းတယ်မဟုတ်ဘူး ပထမတချက်က Index ရှိရင် Data အပြင် Index တွေမှာပါ Modify လုပ်ရတဲ့အတွက် Insert, Update, Delete မှာ သာမန်ထက်ကြာတယ် အဲဒါကြောင့် Index တွေကို လိုတာထက်တော့ ပိုမထည့်သင့်ဘူး။ နောက်တချက်က စဉ်းစားရတာ နည်းနည်းခက်လိမ့်မယ် Index ရှိတိုင်းလည်း Query မှာ မြန်တယ်တော့မဟုတ်ဘူး Index မှာလည်း အမျိုးအစားတွေရှိတယ် Equal နဲ့ Filter လုပ်တယ်ဆိုရင်တာ့ အများအားဖြင့် ဘယ်လို Index ပဲဖြစ်ြဖစ် Performance အတွက် အသုံးဝင်ပေမယ့် Range နဲ့ရှာတာမျိုးကျတော့ ဥပမာဆိုရင် ID >0AND ID < 2000 ဆိုတာမျိုးကျတော့ Data တွေက Physically Cluster ဖြစ်နေတဲ့ Index မျိုးမှပဲ အသုံးတည့်တာတွေရှိတယ် အဲဒါတွေကျတော့ အများအားဖြင့် Product Specific ဆိုတော့ ကိုယ်သုံးနေတဲ့ Database အမျိုးအစားအပေါ် မူတည်ပြီးတော့ပဲ Index အမျိုးအစားဘယ်လိုရှိတယ် ဘယ်ဟာတွေအသုံးဝင်မယ် ပြောလို့ရပါလိမ့်မယ်။